. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: September 2012
တချို့မျက်ဝန်း ကောက်ကျစ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတယ် ...။
နှလုံးသားရဲ့ ယဉ်ကျေးသောတီးလုံး တီးခတ်
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အေးမြစေ ...။
နံနက်တွေ သစ်စေမည် ...။
ရေးသားသူ မိုးခါး at 9/08/2012 01:20:00 PM2comments: